Isikhungo somlilo - Wikipedia
Isikhungo somlilo (esibizwa nangokuthi indlu yomlilo, ihholo lomlilo , ihholo labacimi bomlilo, noma indlu yenjini ) isakhiwo noma enye indawo yokugcina izinto zokucisha umlilo ezifana nezimoto zomlilo nezimoto ezihambisanayo, izinto zokuzivikela, amapayipi omlilo nezinye izinto ezikhethekile.Iziteshi zomlilo zivame ukuba nendawo yokusebenza nezicishamlilo nabasebenzi bokusekela.
Emadolobheni amakhulu ase-US, iziteshi zomlilo zivame ukubizwa ngezinkampani zomlilo eziyinhloko kanye nezinto zokusebenza ezigcinwe lapho, njenge "Ladder 49".Ezinye iziteshi zomlilo zithiwa ngokususelwa esifundeni, endaweni, edolobhaneni noma esigodini lapho zitholakala khona, noma zinikezwe inombolo.
I-American MUTCD isayinisa isexwayiso sesiteshi somlilo i-W11-8
Isiteshi sezicishamlilo okungenani sizoba negalaji lokwakha okungenani injini eyodwa yomlilo.Kuzoba nendawo yokugcina impahla, yize okokusebenza okubaluleke kakhulu kugcinwa emotweni uqobo.Izindlela zesiteshi somlilo zivame ukufakwa nezimpawu zokuxwayisa, futhi kungahle kube nophawu lomgwaqo lokumisa noma lokuxwayisa ithrafikhi lapho izinsimbi zisuka noma zibuyela esiteshini.
Iziteshi zomlilo zivame ukwakhiwa ngombhoshongo, ngezinhloso eziguquke ngokuhamba kwesikhathi.Umbhoshongo we-drill usetshenziselwa ukwenza ukutakula okuphezulu, kuyilapho umbhoshongo we-hose usetshenziselwa ukulenga amapayipi ukuze ome ukuvimbela ukubola. Ngokomlando, imibhoshongo yayingababheki bemlilo.
Imisebenzi esiteshini somlilo ifaka ukuhlolwa njalo nokuhlanzwa kwezinto zokusebenza kanye nemishini, kanye nokuzivivinya lapho abacimi bomlilo benza khona amakhono abo.Ezinye izinkampani zomlilo nazo zisingatha imisebenzi yomphakathi esiteshini somlilo ngesikhathi semicimbi efana "neviki lokuvimbela umlilo", futhi isikhungo singasetshenziselwa ukuqoqa imali "yinhlangano yabacimi mlilo", " abacimi bomlilo ", noma "abasizi bomlilo".
Retrieved from "https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Isikhungo_somlilo&oldid=92181"
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-21 uNcwaba 2021, nge-23:19.